Backgammon🥇 Midira ary mankafiza amin'ny Emulator.online
Backgammon: ahoana no milalao tsikelikely? 💡
Milalao backgammon amin'ny Internet maimaim-poana, fotsiny araho ireo torolalana tsikelikely:
Dingana 1 . Sokafy ny navigateur tianao ary mandehana ao amin'ny tranokalan'ny lalao Emulator.online.
Dingana 2 . Raha vantany vao miditra amin'ny tranokala ianao dia efa hiseho eo amin'ny efijery ny lalao. Tsindrio fotsiny ny "Milalao" ary afaka manomboka milalao ianao, misafidy ny milalao mifanohitra amin'ny masinina na milalao miaraka amin'ny namana.
Dingana 3. Ireto misy bokotra mahasoa. Afaka "Manampy na esory ny feo", Tsindrio ny bokotra"milalao"ary manomboka milalao, azonao atao"Pause"sy"reboot"amin'ny fotoana rehetra.
Dingana 4. Esory ny sombin-kazo rehetra alohan'ny mpanohitra anao.
Backgammon midika 🙂
Ny teny backgammon no anarana nomena ny lalao izay misy a birao misy taila amin'ny endrika sy loko isan-karazany, izay mitaky ny voalamina ao fisaka ambonin`ny, matetika tabilao, izany no anarany.
Araka ny lalàna, izay tsy mitovy amin'ny lalao tsirairay, olona iray na maromaro no afaka mandray anjara. Raha ny lalao sasany dia mitaky mpandray anjara hampiasa fanjohian-kevitra stratejika na taktika, fandrindrana, fahakingan-tanana, fahatsiarovana, fahaiza-manavakavaka, na fahaiza-manao hafa, ny lalao hafa kosa dia kisendrasendra fotsiny, fandresena na resy.
Amin'ny natiora, ny lalao amin'ny ankapobeny tsy misy resaka fampihetseham-batana, na dia misy aza ny mampiditra ny latabatra sy manao hetsika ivelan'io. Ny lalao amin'ny birao dia matetika sokajina amin'ny sokajy samihafa arakaraka ny mampiavaka azy manokana.
Ireto misy ohatra amin'izany.
Ireo izay mampiasa dice: Izy ireo dia lalao izay mampiasa dice izy ireo na sombina izay mitovy aminy, toy ny Tauli, Ludo, Parks, Backgammon, Bibilava sy tohatra ankoatra ny hafa.
Ireo izay mampiasa famantarana izy ireo: Ampiasaina koa izy ireo lalao izay mampiasa mari-pamantarana toy ny singa lehibe. Ohatra amin'izany karazana lalao izany ny toy ny daomy na ny mahjong.
Lalao birao nentim-paharazana: Ireto misy kilalao izay lalaovina eny amin'ny solaitrabe, toy ny kilalao fianakavian'ireo chess (Chess tandrefana, Xiangqi na Shogi "chess sinoa" na "chess Japoney", ny Janggi na "chess Koreana" na Makruk, antsoina koa hoe "chess Thai"), vehivavy, Chess sinoa, Hnefatafl (kilalao birao fianakaviana Alemanina), Mancala (lalao filankevitry ny mpianakavy ary Surrta.
Lalao birao ankehitrinyNa dia tsy manavaka tsara ny antsoina hoe "lalao board" aza izy ireo, dia antsoina ihany koa ireo lalao ireo satria amin'ny ankamaroan'ny tranga dia mampiasa fampiasa amin'ny fampandrosoana ny lalao izy. Raha ny tena izy, ny tontolo Breziliana dia manendry lalao ady malaza fa ny teny hoe "lalao ady" dia fandikana ara-bakiteny.
Lalao Multiplayer: Izy ireo koa dia azo ampifandraisina amin'ny tranga sasany mpilalao mihoatra ny telo, fa milalao roa matetika izy ireo. Anisan'ireny ny jlalao karatra nentim-paharazana, na amin'ny tokotanin'ny frantsay na espaniola; na lalao karatra toy ny Hanafuda, izay fomban-drazana any Japon.
Ny karazany maoderina sy ara-barotra amin'ny lalao karatra dia ny lalao karatra azo angonina toy ny Magic: The Gathering na Yu-Gi-Oh!.
Izy ireo dia noforonina tamin'ny tapaky ny taona 1970. Izy ireo dia lalao izay andraisan'ny olon-kafa mazàna mametraka ny mpilalao amin'ny toe-javatra manokana mamela azy ireo handalo fitsapana hahatratra tanjona iray fa adika izy ireo.
Raha ny marina, Ny mampiavaka ny Backgammon dia ny filalaovana andraikitra fa tsy ny fampiasana latabatra. Dungeons & Dragons dia karazana backgammon antsoina hoe nofinofy mahery fo, saingy vetivety dia tonga eny amin'ny tsena, aingam-panahy avy amin'ny fisehoan'ireo backgammons hafa an'ny karazan-karazany maro hafa toa ny tandrefana, ny firaisana ara-nofo, ny foronina amin'ny siansa, ny tantara an-tsehatra, horohoro gothic, hatsikana, fitsikilovana, piraty, sns.
Tantara Backgammon 🤓
Anarana Backgammon dia avy amin'ny teny hoe gamen (avy amin'ny anglisy medieval), izay midika hoe lalao.
Ny lalao nataon'ny fianakaviana Backgammon dia iray amin'ireo lalao voalohany nipoitra. Ny ankamaroan'izy ireo dia misy ny fanakodia ny dice na zavatra mitovy aminy toy ny akorandriaka, masomboly na paompy.
Ity fianakaviana ity dia misy lalao malaza maromaro, anisany i Senet (kopian'ny lalao hita tao amin'ny fasan'i Tutancamon), Nyout (lalao Koreana), Patolli (mety ny lalao ankafizin'ny Aztecs), Pachisi (lalao nasionaly Indiana, miaraka amin'ny maro hafa variants) ao Ludo sy Chispa) ary ny Game of the Goose (lalao eropeana nanjary nalaza tamin'ny taonjato faha-XNUMX).
Azo lazaina fa Backgammon dia ny vokatry ny fanovana maro sy ny fivoarana, ary koa ireo lalao taloha maro hafa izay mbola velona mandraka androany. Ny fiandohany dia mety misy ifandraisany amin'ireo sivilizasiôna Sumerian sy Egyptianina taloha. Ireo takelaka tsy dia mitovy amin'ny an'ny maoderina dia hita tao am-pasana tao amin'ny Lohasahan'i Neily any Egypta, ary koa amin'ny toerana milevina ao Ur any Mesopotamia.
Talohan'ny 800 dia nisy lalao antsoina hoe Nard niseho tany Persia. Azo antoka fa ny Arabo dia efa nahalala ny lalao, ary koa ny lalao hafa, rehefa nandresy an'i Persia tamin'ny taonjato faha-XNUMX izy ireo. Ny Persianina kosa dia nianatra ireo lalao ireo tamin'ny Hindus, izay mety ho nahalala azy ireo tamin'ny alàlan'ny sinoa. Saingy ny Arabo no nanangana ireo lalao ireo tamin'ny ambaratongam-dehibe ka nanoratra ny boky voalohany momba azy ireo. Ny Nard sy ny karazany dia hita any amin'ny toerana maro any Azia.
Toa ny lalao Nard dia natolotry ny Arabo tany Eropa, ary nifangaro tamin'ny lalao Tabula dia niteraka kinova vaovao. Sombiny 30 no nampiasaina tamin'ny tabilao 24-point, ny hetsika dia faritan'ny dice roa.
Tao anatin'ny fotoana fohy dia nanjary nalaza ilay lalao vaovao, nifaninana tamin'ny chess ho an'ny toerana voalohany teo amin'ireo manan-kaja, toerana iray nohazonin'ny lalao karatra taty aoriana
Tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo niseho variant vaovao iray izay, miaraka amin'ny fanatsarana ny singa, nitarika ny famelomana indray ny lalao sy ny fielezany nanerana an'i Eropa. Nanjary nalaza tany Angletera izy Backgammon, any Scotland ho Gammon, any France as Trictrac, any Germany as Puff, in Spain as Tablas Reales and in Italy as Tavole Reale.
Tamin'ny vanim-potoana teo alohan'ny Ady Lehibe Faharoa dia nisy tazo filokana. Ny iray amin'ireo antony dia ny fanavaozana nataon'ny amerikana tamin'ny 1925, ny mety hampitomboana avo roa heny ny sandan'ny isa nilalao. Saingy indray, nihena ny lalao.
Tamin'ny taona 1970, tsy nampoizina, nanjary nalaza indray, ka hatramin'ny androany dia mora ny mahita ny mividy ny singa sy ny boky fampianarana. Any Moyen Orient, nitazona ny lazany i Trictrac ary lalaovina be any Libanona sy ireo firenena manodidina azy.
Fitaovana hilalao Backgammon💡
Mba hilalaovana Backgammon dia mila mpandray anjara 2 ianao, tabilao backgammon, taila mainty 15, taila fotsy 15 ary dice roa misy kilasy 6, miaraka amin'ireo trano telozoro 24 voakambana 6 ka hatramin'ny 6 ary mizara efatra.
mpilalao - 2
sekely na vato - 15 mainty, 15 fotsy
Board - Trano miloko 24 mifampitohy voasokajy amin'ny 6 ka hatramin'ny 6 ary mizara efatra
Tanjona: esory ny taila rehetra amin'ny solaitrabe alohan'ny mpanohitra.
Fitsipika lalao Backgammon📏
Indro misy famintinana haingana amin'ny lalàna Backgammon:
Apetraho amin'ny alalàn'ny dice ny mpilalao voalohany
Mifindra ampahany mifototra amin'ny sanda nalaina avy amin'ny angona
Ny fitoviana data dia ahafahana mihetsika indroa
Tsy azo atao ny mamindra ny sombinao amin'ny trano misy sombiny roa mifanohitra
Raha iray monja amin'ny mpifanandrina ny trano kendrena dia azo samborina izy io
Manomboka amin'ny esory ny sombinao amin'ny solaitrabe rehefa ao anatin'ny quadrant farany izy rehetra
Ny lalao backgammon dia kilalao birao nentim-paharazana, aiza ny mpandresy dia ilay mahavita manala ny sombiny rehetra amin'ny solaitrabe aloha.
Fa raha mila mamaky ianao ny lalàna feno, Avelantsika eto ambany izy ireo.
Famaritana ny mpilalao voalohany
Alohan'ny hanombohana ny fihetsiky ny sombin-javatra dia ilaina farito hoe iza no mpilalao hilalao.
Mba hamaritana hoe iza no manomboka ny lalao backgammon, mpilalao tsirairay dia tsy maintsy mihodina 1 maty. Izay mahazo ny soatoavina avo indrindra no ho voalohany milalao. Raha sendra misy karavato dia navoaka indray ny dice mandra-pahafatin'ny mpilalao voalohany. Ity farany dia tsy maintsy mandray ny dingana voalohany, amin'ny fampiasana ny sandan'ny dice izay ho lalaovin'izy ireo aloha.
ohatra: Player A manakodia maty ary mahazo ny sanda 5; ny mpilalao B dia manakodia maty ary mahazo ny sanda 5 ihany koa; mpilalao A manakodia maty indray ary ankehitriny dia mahazo ny sanda 4; ny mpilalao B dia manakodia maty ary mahazo ny lanja 6; Player B no voalohany milalao miaraka amin'ny soatoavin'ny dice 4 sy 6 (sanda amin'ny dice farany nilalaovan'ny mpilalao A sy B).
Mihetsiketsika faritra 🧩
Taorian'ny dingana famaritana hoe iza no manomboka ny lalao backgammon, ny mpilalao tsirairay kosa dia tokony mihodina 2 dice ary afindra ny sombinao arakaraka ny sanda data.
Mpilalao rehetra foana afindra ireo sombin-javatra amin'ny lafiny iray, ny iray famantaranandro ary ny iray mifanohitra amin'ny famantaran'ora.
Raha toa ny mpilalao ankehitriny dia tsy afaka manao hetsika azo ekena miaraka amin'ireo soatoavina azo amin'ny dice, ity farany kosa dia handalo ny fihodinana.
Ny trano kendrena amin'ny sombin-javatra iray dia tsy mety ho iray izay efa manana fehezin'ny mpifanandrina 2 na mihoatra. Raha tsy manana afa-tsy ampahany mifanohitra 1 ny trano kendrena dia voasambotra izy, miala amin'ny solaitrabe ary mankanesa any amin'ny "bar".
Rehefa manana singa iray na maromaro voasambotra ny mpilalao dia tsy afaka manao hetsika famonjena fotsiny izy, izany hoe, fihetsika izay manala ireo sombin-kazo namboarinao avy eo amin'ny bara ary mametraka azy ireo ao anaty trano iray, mankatò hatrany ny fitsipika fa ny trano kendrena dia tsy afaka ahitana mihoatra ny 1 mifanohitra.
Raha manodina ny soatoavina mitovy amin'ny mpilalao 2 ny mpilalao iray dia manan-jo hanao hetsika 4 izy amin'ny sandan'ny dice fa tsy ny hetsika 2 mahazatra.
Manala ireo sombin-kazo eo amin'ny solaitrabe
Ny mpilalao dia tsy afaka manomboka manala ny sombiny amin'ny tabilao Backgammon rehefa ao anaty quadrant ambany (antsoina koa hoe ny faritra anatiny) izy rehetra. Mba hanesorana sombin-javatra iray dia tsy maintsy ahodinkodin'ilay mpilalao ny vola mitovy amin'ny isan'ny efamira sisa tavela amin'ny dice. Raha mahazo sanda ambony kokoa noho ny ilainao amin'ireo sombin-javatra lavitra indrindra ianao dia tokony esorinao ireo sombin-javatra ireo. Ohatra: Raha mitaky 4 ny fanesorana ireo sombin-javatra lavitra indrindra ary maka 6 ny mpilalao dia azony esorina amin'ny solaitrabe ireo sombin-javatra ireo.
Ny mpandresy amin'ny lalao dia ny mpilalao izay manala ny sombiny rehetra amin'ny solaitrabe alohan'ny mpanohitra.
Torohevitra hilalao Backgammon🤓
Aza avela havela irery ao an-trano
Raha mila avelanao irery ny sombin-javatra iray dia andramo hitazona azy lavitra ny sakan'ny mpanohitra
Ataovy mihidy ny tranon'ny mpanohitra anao
Fonenana trano betsaka araka izay azo atao